Nhau - PCB Kubatanidza: Mhedzisiro pamitengo yePBBP Pakati pePandemic
Pcb Kubatanidza: Kukanganisa pamitengo yePCBP Munguva Yekupararira
Sezvo nyika inochinja kune zvinokonzeresa denda repasirese, pane zvimwe zvinhu zvingavimbike nazvo kuti zvirambe zviripo.
Hupfumi hweChinese hwakatambura pakutanga kwechirwere ichi, hwasimudzwa zvakanyanya, nebasa rekugadzira reChinese rakawedzera kwemwedzi wechi9 wakateerana maererano neNational Bureau of Statistics.
Kugadzirwa kweChinese epamba maPCB pari zvino anopfuura maodha ekutengesa kunze mumafekitori mazhinji uye pamwe nekuwedzera kwemitengo pazvinhu zvakawandisa zvakapfuura 35% mune dzimwe nguva, vagadziri vePCB vava kuda kupfuudza izvi zvakawedzera mutengo kune vatengi, izvo zvavaisemesa kuita panguva zvikamu zvekutanga zvehosha.
Sezvo maodha ekunze anotanga kutora chinowanikwa chinzvimbo chiri kuramba chichideredza kuisa kumanikidza kumaketani ekupa zvinhu, zvichibvumira vagadziri vezvinhu zvisineyi kuti vabhadhare mamwe maprimiyamu.
Ndarama inoramba iri ruzhowa rwepasi rose kusanzwisisika kwehupfumi hwenyika, nesimbi yakakosha ichikwikwidza kumusoro, chiitiko chakawedzera zvakapetwa mutengo wesimbi mumakore mashanu apfuura.
Mutengo wePCB tekinoroji hausi wekuzvidzivirira, neEIG pamusoro pekupedzisa mutengo kunge wawedzera pamatekinoroji ese, kukanganisa kwekuwedzera uku kuri kunzwika zvakanyanya pamazasi ezvakawanda zvigadzirwa sezvo% yekuwedzera iri inopesana zvinoenderana nenhamba yematanho.
Kumhanyisa kwehupfumi hweChinese kuri kunzwikwawo pasirese, iyo US Dollar iri kudzikira 6% kurwisa iyo RMB kubva munaNdira 2020. Pcb mafekitori ane madhora anoburitswa kubva pamabhiri ari kufanira kutora shanduko yemari yekune dzimwe nyika yakarova sezvo mari yavo yebasa iri inobhadharwa nemari yemuno.
Nekuwedzera kwezvinhu zvakasvibirira zvingangoramba zvichienderera kusvikira mushure meChinese Nyowani Nyowani pamwe nekuenderera mberi kwekukwira kwezvinhu zvinotengeswa pasirese, musika zvino wasvika padanho rekuti pcb yekuburitsa mitengo iri kuwedzera kusvika padanho risingagadziriswe kuti mafekitori ave nawo.